Isku shaandhayn Lagu Sameeyey Xukuumadda Kililka 5aad Ee Itoobiya • Oodweynenews.com Oodweyne News
Isku shaandhayn Lagu Sameeyey Xukuumadda Kililka 5aad Ee Itoobiya
Jigjiga (OWN)- Shir ay yeesheen xubnaha gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo muddo laba maalmood ah socday ayaa lagu shaaciyey isku shaandhayn lagu sameeyey xukuumadda uuhoggaamiyo Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ee Kililka Shanaad Ee Itoobiya. Shirkan oo uu hogaaminayey gudoomiyaha X.D.Sh.S.I Maxamad Rashiid Isaaq iyo Gudoomiye kuxigeenka X.D.SH.S.I ahna madaxweynaha DDSI mudane Cabdi maxamud cumar waxaa halkaasi lagu shaaciyey liiska isku shaandhaynta golaha wasiirrada/xoghayeyaasha maamulka Jijgjiga, kuwaas oo ka kooban 25 xubnood iyo 4 guddoomiye gobol. Waxaanay kala yihiin:
FartuunCabdi Mahdi, Xoghaya/Madaxa maalliyada ee DDSI
Axmed Cabdi, Wasaaradda Biyaha ahna xubin guddida fulinta.
Cabdixakiin Cigaal Cumar, madaxa xafiiska PCDP ahna xubin golaha dhexe.
Sucaad Axmed Faarax, Meesheedii lagama badalin [lama sheegin xilka ay haysay].
Khadar Cabdi Ismaaciil, Madaxa xarunta golaha dhexe ee XDSHSI.
XamdiAadan Cabdi, Wasiirka Caafimaadka ahna madax weyne kuxigeen.
Suldaan Kheyre, wuxuu noqday xubin guddi fulin ah wuxuuna joogayaa xafiiskiisa
Maajid Maxamed oo ahayd wasiirka xafiiska xoolaha waxa loo bedelay wasiirka madaxtooyada
Cumar Maxamed,isagu waxaa uu joogayaa meeshiisii [lama shaacin xilkauu hayay]
Ibraahim Cali Wuxuu noqday wasiirka sayniska iyo tiknoolojiyada
Baashe Cabdi Ismaaciil Wuxuu nqoday wasiir ku xigeenka xafiiska sayniska iyo tiknoolojiyada
Fuaad JaamacWahaabi wwaxaa loo magacaabay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska
Maxamad Rabiic Xaaji Cabdiqaadir,Wasiirka Daakhiliga
Cabdillaahi Garbo waxauu noqday xoghayaha xafiiska ka hortagga iyo u diyaar garawga masiibooyinka
Haaruun Yuusuf Cabdi,wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka iyo wershadaha
Marwo Raxma maxamud halkeedii ayay joogaysaa
Mudane C/mahad maxamed cabas wasiirka horumarinta xoolo-dhaqatada iyo reer guuraga
Mudane gamaal Farax warmooge madaxa xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha DDSI
Mudane ibraahin aadan mahad wuxuu joogi meeshiisii
Mudane C/Jamal axmed qaloonbi meeshiisii ayuu joogaa
Mudane jamaal cismaan qorane wuxuu noqday xubin gudi fulin ah
Mudane miig bile waxa loo badley xafiiska tababarada xirfadaha iyo farsamada DDSI
Eng. Asad cumar wuxuu joogaa meeshiisii
Mudne rashid jamac sheer wuxuu noqday wasiir kuxigeen
Mudane xasan aadan xasan wasiir kuxigeen.
Gudomiyeyaasha gobolada ee cusub
Mudane cabdi casiis Ahmed Habiye oo ahaa Gud degmada shabeeley ayaa waxa uu noqdey gudoomiyaha gobalka qoraxay
Mudane Muxumed Xassan suufi oo ahaa mayarka maamulka magaalada dhagaxbuur wuxuu noqdey Gudomiyaha Gobolka jarar
Mudane Xabiib Adan oo ahaa gudoomiye degmo waxa uu noqdey gudomiye Gobol
Mudane maxamed cali oo ahaa madaxa xafiiska waxbarashada gobolka faafan waxa uu noqdey Gudoomiyaha gobalka dhawa.
Isku Shaandhayntan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu dhawaan raysal wasaaraha cusub eedalka itoobiya Abaya Ahmed booqadiisii u horreysay ku tegey deegaanka Soomaalida Itoobiya ,taasi oo uu ku soo afjaray colaadii u dhaxaysay qawmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.